Nnwom 60 AKCB - Mateo 60 MTDS
Dawid “Miktam” dwom. Wɔde yɛ nkyerɛkyerɛ. Ɔtoo no bere a ɔne Aram Naharanfo ne Aram Zobafo koe na Yoab san kokum Edomfo mpem dumien wɔ Nkyene Bon mu no.
1Onyankopɔn, woapo yɛn, woabɔ yɛn agu;
wo bo afuw yɛn, nanso gye yɛn bio!
2Woawosow asase no na woapae mu;
toatoa nea abubu no, efisɛ ɛrehinhim.
3Woama wo nkurɔfo ahu mmere bɔne;
woama yɛn nsa a ɛma yɛtɔ ntintan.
4Nanso wɔn a wosuro wo de, woama wɔn frankaa so
sɛ wontu ntia agyan no.
6Onyankopɔn akasa afi ne kronkronbea se,
na masusuw Sukot bon no.
7Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara;
Efraim yɛ me dade kyɛw,
Yuda yɛ mʼahempema.
8Moab yɛ me guasɛn,
Edom so na metow me mpaboa gu;
na meteɛ mu nkonimdi so gu Filistifo so.”
9Hena na ɔde me bɛkɔ kuropɔn a wɔabɔ ho ban no mu?
Hena na obedi mʼanim akɔ Edom?
10Onyankopɔn, ɛnyɛ wo na woapo yɛn
na wo ne yɛn asraafo nkɔ ɔsa bio ana?
11Boa yɛn tia ɔtamfo no,
na ɔdesani mmoa nka hwee.
12Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim,
na obetiatia yɛn atamfo so.
AKCB : Nnwom 60